Magaalo bäriga Sucuudiga ku taal oo ku dagaalamay ciidamo Suudiyaan ah iyo dhalinyaro Shiico ah – Balcad.com Teyteyleey
Magaalo bäriga Sucuudiga ku taal oo ku dagaalamay ciidamo Suudiyaan ah iyo dhalinyaro Shiico ah
Magaalada Awaamiya, oo kutaala bariga Boqortooyada Sucuudiga ayaa xiligan waxaa ka taagan xaalad aad u adag oo dhinaca nolosha ah, waxa ayna magaalada u muuqataa mid aad u bur bursan oo dagaal ku jirta.
Waxaa magaaladan ay ku badan yihiin dadka shiicada bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay rabshado u dhaxeeyay ciidamada amaanka Sacuudiga iyo dhalinayro Shiico ah, waxaana rabshadahaasi ku dhintay dad badan oo shacab ah iyo askar isugu jira.
Wariyaasha ka socda Warbaahinta caalamka ayaan loo ogoleyn in ay sida ay doonaan magaalada u tagaan wararna kasoo tabiyaan, waxaana Wariyaasha tirada yar ee loo ogolaado in ay tagaan magaalada maraan culeesyo badan.
Magaalada Awaamiya waxaa ka taagan xaalad adag oo dhinaca amaanka iyo nolosha ah, waxaana wali qeybo kamid ah magaalada ka dhaca rabshado dhax mara kooxo hubeesan oo shiico ah iyo ciidamada amaanka Sacuudiga.
Wariye katirsan BBC-da oo tagay magaalada ayaa sheegay in Muuqaalka magaalada u egtahay magaalooyinka dagaalka ka jiro oo kale sida magaalooyinka Mosil iyo Alebo, waxa uuna sheegay in lagu arkayo magaalada bur burka guryo badan iyo gaadiid badan oo iyana la gubay.
Magaalada ay kunoolaayeen dad u badan Shiico ayaa hada haawaneysa, waxaana magaalada isaga qaxay inta badan dadkii shacabka ahaa ee kunoolaa, waxaana darbiyada guryaha kuyaala magaaladaasi ka muuqda rasaas .
Dowlada Sacuudiga ayaa ku mashquulsan bur burinta qeybo badan oo kamid ah magaalada , waxa ayna dowladu sheegtay in la bur burinayo dhismayaal qadiimi ah lagana sameenayo guryaha la bur buriyay mashaariic magaalada muhiim u ah.
Rabshadaha gacan ka hadalka ee magaalada ka dhacay ayaa ka dhashay bur burinta dowlada Sacuudiga ku wado dhismayaal kuyaala magaaladaasi ay leeyihiin dad Shiico ah, waxa ayna rabshadahan horseedeen bur burka magaalada iyo Dhimashada dad badan.
The post Magaalo bäriga Sucuudiga ku taal oo ku dagaalamay ciidamo Suudiyaan ah iyo dhalinyaro Shiico ah appeared first on Ilwareed Online.
Haweenay si jees jees ah Xijaab iyo Indha Shareer ugu dhax xiratay Aqalka Sanetka Australia
Shirkada Korontada BECO oo Garasbaaley Degmo u Aqoonsatay
admin	 Sep 22, 2017